भर्ने होइन त ? अमेरिकी डिभी चिठ्ठा आज रातिबाट खुल्दै, यसरी भर्न सकिन्छ – SaipalNews.com
काठमाडौँ। सन् २०२० को अमेरिकी डाइभर्सिटी भिसा डिभीको फारम बुधबार रातिदेखि खुल्दैछ। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका अनुसार डिभी आवेदन दर्ता अवधि नेपाली समयअनुसार बुधबार राति ९ः४५ बाट सुरु हुनेछ।
साथै कार्तिक २० गते राति १०ः४५ बजेदेखि बन्द हुनेछ। डिभी चिठ्ठामा सहभागि हुन शुल्क नलाग्ने नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ।
डिभी फारम कसरी भर्ने ? यस्तो छ प्रक्रिया:-
आवेदन निस्शुल्क: डि.भी. चिट्ठामा सहभागी हुनका लागि शुल्क लाग्दैन ।
. कन्सल्टेन्टको आवश्यकता नपर्ने : अमेरिकी दूतावास तपाईँहरूलाई आवेदन भर्दा कन्सल्टेन्टको सहयोग नलिन सल्लाह दिन्छ। आवेदनसम्बन्धी सहयोग चाहिएमा परिवारको सदस्य, साथी वा अन्य विश्‍वासिलो व्यक्तिको सहयोग लिनेतर्फ विचार गर्नुहोला। सहयोग जसले उपलब्ध गराए तापनि आफ्नो आवेदनका लागि तपाईँ स्वयम् जिम्मेवार रहनुहुनेछ।
.फारम अनलाइन भर्नुपर्ने : सन् २०२० को डाइभर्सिटी भिसा चिट्ठाका लागि आवेदकहरूले दर्ता अवधिमा www.dvlottery.state.gov मा गई इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिसा (ई.डि.भी.) आवेदन फारम भर्नु पर्नेछ।
.पारिवारिक विवरण खुलाउनुपर्ने: दर्ता गर्दा तपाईँले आफ्ना पतिरपत्‍नी र आवेदनको समयमा २१ वर्ष नपुगेका सबै अविवाहित सन्तानलाई सूचिकृत गर्नु अनिवार्य छ। उनीहरूलाई समावेश नगरी पेश गरिएको आवेदन अमान्य ठहरिनेछ।
.परिवारका अयोग्य सदस्यको विवरण समावेश गर्न नहुने: सन् २०२० को डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रमका हकमा एक नयाँ नीतिगत परिवर्तन गरिएको छ, जसअनुसार मुख्य आवेदकले अयोग्य पतिरपत्‍नी वा सन्तानको विवरण समावेश गरी पेश गरेको आवेदन अबदेखि अयोग्य ठहरिनेछ।
.एक जनाका लागि एउटा आवेदन: तपाईँले एउटा मात्र आवेदन बुझाउनु पर्नेछ। एकभन्दा बढी आवेदन बुझाउने आवेदकहरू चिट्ठाका लागि अयोग्य ठहरिनेछन्।
.हालसालै खिचिएको फोटो : अघिल्लो वर्षको डि.भी. आवेदनमा प्रयोग गरिएको फोटो यस वर्षको आवेदनमा प्रयोग गरेमा अयोग्य ठहरिनेछ। फोटोसम्बन्धी नियमहरू कडाइका साथ पालना गर्नु पर्नेछ र प्रत्येक फोटो आफ्नो आवेदनमा समावेश भएका सही व्यक्तिहरूसँग मेल खाने गरी पेश गर्नु पर्नेछ। फोटो खिच्दा आवेदकहरूले चश्मा वा टोपी लगाउनु हुँदैन।
.आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बरलाई अवश्य सेभ र प्रिन्ट गर्नुहोस् : यो नम्बर नै तपाईँको स्टेटस चेक गर्ने एक मात्र तरिका हो।
.आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बर कसैलाई पनि नदिनुहोस्।
.तपाईँ डि.भी. का लागि छनोटमा पर्नुभयो कि भएन भनी निर्धारण गर्ने एउटा मात्र विधि भनेको मे ७, २०१९(२०७६ वैशाख २४) वा त्यसपछि www.dvlottery.state.gov मा गई आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बर प्रवेश गर्नु हो।
आवेदन दर्ता गर्दा आवेदकहरूले आफ्नो ईमेल ठेगाना प्रदान गर्नुपर्नेछ। यद्यपि, के कुरा स्मरण गर्नुहोस् भने छनोट भएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरू छानिएका छन् भन्ने व्यहोराको ईमेल सूचना पठाइँदैन।
नेकपा सुदूरपश्चिम संसदीय दलको बैठक बस्दै
दुधकोसीसहित सुनकोसी मरिण डाइभर्सन निर्माण थालिने